DEG DEG:War argagax galiyey Madaxda Puntland oo hada laga soo sheegay Jiidaha hore ee Tukaraq & Ciidamadii ugu badnaa Puntland oo Somaliland……. – Shabakadda Puntland FM
You are here: Home WARARKA MAANTA DEG DEG:War argagax galiyey Madaxda Puntland oo hada laga soo sheegay Jiidaha hore ee Tukaraq & Ciidamadii ugu badnaa Puntland oo Somaliland…….
DEG DEG:War argagax galiyey Madaxda Puntland oo hada laga soo sheegay Jiidaha hore ee Tukaraq & Ciidamadii ugu badnaa Puntland oo Somaliland…….
Wararka Warsidaha Puntland FM t uu haatan ka helayo deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in qaar kamid ah saraakiisha iyo ciidamada Daraawiishta Puntland lagu arkayo saldhigyada ciidamada maamulka Somaliland oo ay ku leeyihiin deegaankaasi Tukaraq.
Ciidamadani oo gaadhaya ilaa 15 Askari iyo hal sarkaal oo hogaaminaya ayaa waxaa la sheegay in ay kasoo goosteen Maqribnimadii shalay ahayd ciidamada Puntland ee ku sugan jiidaha hore ee deegaanka Faliidh Yaale ee gobolka Sool kadib markii saluug iyo cabasho xoogan ay ka muujiyeen xuquuqdoodii ciidan oo aanan la siin.
Ciidankan ayaa waxa ugu weyn ee ay ka cabanayaan waxa ay tahay mushahar la’aan baahsan ay soo wajahday, taas oo la sheegay in ay ka dambaysay goosashadooda.
Saraakiisha ciidamada maamulka Somaliland ee ku sugan jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq ayaa la sheegay in ay si weyn u soo dhoweeyeen ciidamadani oo kasoo jeeda gobolka Sool isla mar ahaan taana wixii xiligani ka dambeeya ay kamid noqon doonaan ciidamada maamulka Somaliland.